ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အဝေးပြေးလမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အဝေးပြေးလမ်း
Posted by weiwei on Feb 5, 2011 in Photography, Travel | 17 comments
၁၁၅ မိုင်က နားနေစခန်း
နေပြည်တော်လမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေကြတာတွေ့လို့ လမ်းပုံတစ်ချို့တင်လိုက်ပါတယ်။ လမ်းတလျှောက် တစ်ပုံစံထဲမို့လို့ ပုံနဲနဲပဲ တင်လိုက်တော့မယ်။ ကားမှန်ခံပြီး ရိုက်ထားလို့ ပုံတွေက နဲနဲဝါးတာားတားဖြစ်နေတယ်။
လမ်းမှာ ကျွန်မတို့ကားက ကီလို ၁၀၀ နှုန်းနဲ့ပဲ မောင်းသွားပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ မနက် ၅ နာရီထွက်ပြီး နေပြည်တော်ရောက်တော့ ၁၀ နာရီခွဲ ဖြစ်နေပြီ။ လမ်းတလျှောက် တခြားကားတွေကချည်း ကျော်တက်သွားကြတယ်။ ကားအကောင်းတွေက ကီလို ၁၀၀ ကျော်နှုန်းနဲ့ မောင်းကြပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာ land cruiser ကားကြီးတစ်စီး ခေါင်းကြေနေတာကို တွေ့ခဲ့ရသေးတယ်။
ယူအက်စ်ရဲ့ အယ်လ်အေကနေ လပ်စ်ဗေးဂတ်စ် သွားလမ်းနဲ့တောင်တူနေသေးတယ်..။
ဒါပေမဲ့ .. နေပြည်တော်လမ်းက ..အစိမ်းရောင်တွေများတယ်ပေါ့..။ မြက်ခင်းလား..စပါးကွင်းလားတော့မသိ..။
လပ်စ်ဗေးဂတ်လမ်းက.. လမ်းပုခုန်းမှာ .. လမ်းကိုအထစ်ထစ်တွေလုပ်ထားတယ်..။
အဲဒီလိုဆိုတော့ ..အိပ်ငိုက်ပြီး လမ်းဘေးဘီးရောက်သွားရင်..တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ကားကတုန်လာတာမို့ .. မျက်လုံးပြန်ကျယ်ရော..။
အမေရိကန်တပ်တွေလာရင် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို လေယာဉ်ပြေးလမ်းအဖြစ်သုံးလို့ ရတာပေါ့။
အဲဒီလို မဖြစ်အောင် လမ်းလယ် ခုံ လုပ်ထားတယ် .. တရုတ်စီမံချက်တဲ့ .. မဝေ က လမ်းကွေ့ချိုးတွေ ဘာလို့ မပြထားတာလဲ .. အချိုးမပြေတာကို သူများတွေ တွေ့စေချင်လို့ပါ
ကားပေါ်မှာ တစ်ချိန်လုံး အိပ်ပျော်နေတာနဲ့ ဓါတ်ပုံသိပ်မရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူး …
အချိုးမပြေတာကတော့ အပြန် ၁၁၅ မိုင်မှာ အထွက်လမ်းက ၀င်္ကဘာလိုဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး နေပြည်တော်ဘက်လမ်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ် … ပြန်ကွေ့ဖို့ အဖြတ်လမ်းကိုကြည့်တာ ၄ မိုင်ဆက်တိုက် မောင်းပြီးမှ တွေ့လို့ ၈ မိုင်ပိုမောင်းလိုက်ရတယ် …
လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ် လိုသေးတယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးချင်လို့လား
တရုတ်ပြည်မှာ တောက်လျှောက်ခရီးသွားလာတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မှတ်ချက်ပေးရရင် သိပ်များလွန်းနေလို့ ဘာမှ မှတ်ချက်မပေးပဲ အိပ်ပဲ အိပ်နေလိုက်ပါတော့တယ် ..
ဦး ဘစ်ကက် ခင်ဗျား ထင်မြင်ချက်နဲနဲလွဲနေတယ်လို.ထင်ပါတယ်
ကျေးဇူးပါ ကြောင်မင်ဘာရေ။ အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးကို ဘူဒိုဇာအစီးတရာလောက် ရှာထားဖို့ ပြောလိုက်ပါ့မယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း ခုတ်ပြီးသား သစ်တွေကို ရောင်းဖို့ပြောထားပေးပါအုံး။ တေဇတို့နဲတော့ မလုပ်ချင်ဘူးဗျား၊ တခြားလူနဲ့ပဲလုပ်ချင်တယ်။ ခုတ်ပြီးပြီးချင်း သယ်မှရမှာနော။ အကျိုးအမြတ်ကတော့ ဘယ်သူမှ မနစ်နာစေရပါဘူး။
လမ်းလယ်ခေါင်က သစ်ပင်ကြီးတွေစိုက်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိပေမယ့် လောလောဆယ်မှာတော့ တစ်ပေခန့်သာ ရှိပါသေးတယ် … ကျွန်မ ဦးလေးပြောတာကတော့ မနှစ်က သူတစ်ခေါက်လာဖြစ်တုန်းကလဲ အဲဒီအပင်တွေက ဒီအရွယ်ပဲတဲ့ …
bonsai များ လုပ်ထားတာလားမသိဘူးနော် ..
၁၁၅မိုင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းရဲ. ပုံစံက မဝေပြောသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သူ.ရဲ.ပုံစံက ရပ်နားရန်နေရာတွေက လမ်းရဲ.ညာဘက်(ရန်ကုန်မှထွက်လျှင်) ဖြစ်နေတဲ.အတွက် လမ်းကြောင်းက ညာမောင်းဆိုတော.မန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်အခုမြင်ရတဲ.ဓါတ်ပုံထဲက စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ.ရှေ.ကနေသွားပြီး ဆီဆိုင်ရှေ.ကနေတိုက်ရိုက်ထွက်ရပါတယ် တကယ်လို.ရန်ကုန်ကိုပြန်ချင်ရင်တော. လမ်းမကြီးမှာတံတားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ.ဒီကနေပဲလမ်းရဲ.ဘယ်ဘက်ကနေ ပန်းပြီးတက်ရပါတယ် တကယ်လို.မန္တလေးဘက်ကိုသွားမိရင်တော.နှစ်မိုင်ဆက်သွားမှ လမ်းဖြတ်ကိုရောက်ပါတယ် တကယ်လို.အဲ.ဒီကနေ လမ်းဟောင်းကိုသွားချင်ရင် စားသောက်ဆိုင်တွေအတိုင်းဆက်သွားပြီး ညာဘက်ကိုဆက်သွားရင် လမ်းဟောင်းကိုရောက်ပါတယ် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းက ဖြူးမြို.နဲ.နီးပါတယ်
ဒါနဲ. အမေရိကန်တွေက ဘယ်လိုပုံစံ နဲ. ဘူဒီဇာတွေကိုပို.ပေးမယ်ဆိုတာလေးလဲ ပြောပြပေးပါအုံး
ဟိုး..တချိန်တုံးက … အမေရိကန်တွေက .. မြန်မာပြည်က ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းဖေါက်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းဖူးတယ်..။ မဟာဗျူဟာအရ .. အချက်အချာကျသမို့ .. လေယဉ်ကြီးတွေဆင်းနိုင်အောင်ပေါ့..။
ဒါကို မြန်မာပြည်က လက်မခံပဲ ငြင်းဖူးးတယ်..။ ငြင်းထားထဲ့ စစ်တပ်က ဒီလောက်တောင် ညံ့ပါ့မလားကွယ်..။
ကိုကြောင်ကြီးက ။။။ အဲဒါစိတ်ကူးယဉ်ပြီးပြောနေတာ..။
သူမသိတာက… ကချင်ပြည်နယ်ဖက်မှာ ကျောက်တူးနေတဲ့ ယန္တယားတွေတော်တော်များများ အမေရိကန်စက်တွေပဲ.။ ဘူဒိုဇာတွေရောပေါ့..။ အစင်းထောင်ချီ … ရောက်တောင်နေပြီ…။
ခုတ်စရာသစ်ပင်မရှိတော့လို့.. တောင်တွေဖြိုနေတာ ..မြေတွင်းကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေပါပြီလို့..
ရန်ကုန် နေပြည်တော် လမ်း မဆိုလို့ တလောက ကြားမိတာလေး ဖွအုန်းမယ်။
အသိ အမျိုးသမီး တယောက် နဲ့ သူ့ အဖေ ကားမောင်းပြီး လာတာ ကားနောက်ခန်းမှာ လူအရိပ်တွေ မှန်ထဲမှာ မြင်နေလို့.. တလမ်းလုံး ဘုရားစာတွေ ရွတ်ပြီး သွားကြတာ အဲဒီ လူအရိပ်တွေက ပျောက်မသွားဘူး ရယ်လို့ မောလို့.. ပျော်ပျော်ကြီး ကားလိုက်စီးတဲ့ပုံတဲ့.. နောက် ရန်ကုန် အ၀င် ရောက်ခါနီးတော့ သူတို့ သားအဖ သတိထားမိတာ မတွေ့တော့ဘူး ဆိုဘဲ။ အဲဒီလိုဘဲ ကားလိုက်စီး တတ်တယ်တဲ့။ ကြားမိလား ကွဲ့..
ဆူးပြောတာ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ … ဒါပေမယ့် ဆူးသူငယ်ချင်းစီးလာတဲ့ကားက ကားအကောင်းစားဖြစ်ရမယ် … မဝေကားကတော့ အစုတ်ဆိုတော့ သူတို့တက်မစီးချင်လို့ထင်တယ် … မတွေ့မိဘူး …
ကော်ရိုလား ဗန် အမျိုးအစား
ခရီးထွက်တုန်းက ဆိုလည်း ကားပေါ်က လူတယောက်က ရှုးပေါက်ချင်တယ် အော်နေတာ မရပ်ရဲဘူး ကားရပ်မလို့ တချက်ကြည့်လိုက် အရှေ့မှာ တံတားရှိတယ် မရဘူး ဆက်မောင်း အရှေ့မှာ ဘာရှိသေးတယ် သူတို့ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ပြောနေတာ သူတို့ တခုခုကို ထိတ်လန့် နေသလိုမျိုး တံခါးဖွင့်ပြီး လူတွေ မလွတ်ပေးရဲဘူး ပြသနာ တခုခုများ ရှိဘူးလားတော့ မသိဘူး။ သရဲတွေ ကားပေါ် တက်လာမှာ စိုးလို့လား မသိပါဘူး ပုံစံတွေ အမူအရာတွေ ကြည့်ရတာ လူသူမရှိတဲ့ လမ်းမှာ မရပ်ရဲဘူး။
တလောက ကြားမိတယ် သူငယ်ချင်း တယောက် ပြောတာ နေပြည်တော် သွားတဲ့ လမ်းမှာ ဓါးမြ တိုက်ခံရတယ်လို့ ပြောတယ်
ရွှေစင်စကြာ ဆိုလား ကားနာမည်က အဲဒီ ကားပေါ်မှာ ရုံးဝန်ထမ်းတွေ ကြီးဘဲ ဆိုတော့ သိပ်များများ မပါဘူးတဲ့.. အဲဒီ ကားကို သိပ်မစီးရဲကြလို့.. နောက်ပိုင်း ပရိုမိုးရှင်းတွေ လုပ်မှ လူတွေ ပြန်စီးကြတယ်တဲ့။
ကိုယ်တိုင် တုန်းကလည်း မုံရွာသွားတာ ရွှေစင်စကြာ ကား စီးသွားတာ အမြန်လမ်းက သွားမယ် ပြောပြီး လူမပြည့်တာနဲ့ အမြန်လမ်း မဟုတ်ဘဲ တမြို့ မှာ တခါရပ်တာနဲ့ ကားဝင်ရမဲ့ အချိန်ထက် ၂နာရီ ၃နာရီလောက် နောက်ကျသွားတယ်။